Ukushisisa kuhovini isifunda amanzi - yidivayisi enemisebenzi eyenzelwe isikhala bafudumale. Izinsiza kusebenza ezifana ihlanganisa titanium futhi umsebenzi isibilisi.
Lezi amaziko ukwenza njenge-ukukhetha eliphezulu Ukushisa izindlu ngaphakathi endlini, kanye izindlu zasemaphandleni. Basuke ifakwe esakhelwe ukushisa, esemgwaqweni esithandweni. Kungenzeka esiteshini ngefasitele. Ezinye izinhlobonhlobo imiklamo isebenze kule osuke usushisa kakade umusi kwegazi Imodi, okungase zingatholakali kuzo evamile Uhlelo kwegazi, lapho amanzi ashisayo likhona.
Ukushisisa-isitofu iziko nge wesifunda amanzi uhlelo elenziwe cast iron noma steel kubhayela. Amadivayisi anjalo enzelwe ukusebenza ngaphansi ophezulu umusi. Zingasetshenziswa njengoba umthombo obengeziwe ukushisa noma njengoba primary isikhala Ukushisa amakhaya. Ngo amaziko ezinjalo umzimba ukushisa ufakwa heater futhi angase abe isakhiwo ethile. Ngokuvamile, isisekelo kwabebhange ukhonza ishidi steel noma metallic tube. Ukwaziswa okukulesi icala kumele lanetinhlavu letingetulu kwa 5 kwangu obukhulu.
Ukushisisa-isitofu iziko nge wesifunda amanzi ngokuvamile inikeza okwesikhathi umzimba ukushisa eyenziwe ishidi steel. i samuntu enjalo iye yatha- kakhulu ngenxa kalula ukucutshungulwa ukusebenza kalula nokugcinwa irejista. Ngakho, abanikazi imishini kalula zigezwe kusukela evele imikhiqizo amandla omlilo ezithinta impahla ehle. irejista Good kumele anikeze izinga lokushisa eliphakeme okungenzeka Isibandisi, ukuqinisekisa kwegazi iyunifomu. Uma kudingekile, ungenza siqu ukushisa yakho, inqubo akusona xaka. Nokho, inkosi kumele babe namakhono ezinhle Welding.
Ukushisa zokusebenza isimiso
Ukushisisa-isitofu iziko nge wesifunda amanzi uhlanganisa edlulisa igesi evuthayo ngokusebenzisa imigudu Ukushisa ethangini. Ziklanyelwe ukuba uthumele amandla ukufudumeza amanzi. Isithando somlilo ingasetshenziswa amadamu amaningi, nge okwandisa ukusebenza kahle. Kwesigubhu lokuqala senzelwe ukufudumeza amanzi, kanti eyesibili uyokhulisa Ukushisa kuze kuze umusi ekhiqizwa. Okuhamba phambili kungenzeka gaphambi kuyadingeka ukwaba ikamelo ehlukile isibilisi.
Ukukhiqizwa ngokuzimela esithandweni
Uma unquma ukunikeza esithandweni Ukushisa, iziko nge wesifunda amanzi, kutuswa ukuba uhlanganyele womshini design main sohlelo owakho. Ngaphambi kokuqala inqubo kudingeka bakhathazeke amarejista kutholakala, umzimba ukushisa, usehlisa ikhoyili, kumbe kubhayela. Esikhathini engekho omunye lezi zinto ungakwazi ukuthenga yezingxenye ulahlekile. Uma unquma bahlanganyele womshini bebodwa, igemfe isidingo metal noma uthayela. Sezitofu ngamanzi wesifunda umugqa ngombala, emincane "Bavaria" ubizwa nangokuthi kahle zokuhamba lokhu. I ukujiya ubuncane steel ukuthi kusetshenziswe senqubo yokukhiqiza we umzimba ukushisa, - 3 kwangu. Le mfuneko eziyinhloko umzimba ukushisa ukunikeza bafudumale esiphezulu amanzi kanye ukufana ukusakazwa kwalo. kuvamile begodu elula operation olusungulwe okuncike steel. Naphezu kweqiniso lokuthi endaweni Ukushisa kuyehla kuqhathaniswa samuntu amapayipi zingabantu kulula ukuhlanza kusuka imikhiqizo amandla omlilo.
bafudumale system isitofu-iziko nge wesifunda amanzi kuhilela ukusetshenziswa ubuchwepheshe ezithile zomsebenzi. Ukuze umkhiqizo umzimba ukushisa bazodinga ubude ipayipi, ubukhulu okuyinto 5 x 6 x 4 cm. Lungiselela unxande iphrofayela igemfe ububanzi 4.5 amasentimitha. Badinga ukuze liphume igazi namanzi. Ubukhulu we umzimba ukushisa kufanele kuchazwe kuye ngendawo ku-Ukushisa lesithando ngosayizi. A ibanga phakathi umzimba nokushisa kuhhavini kufanele kube 4 cm, kungenjalo kokupholisayo kuyobilisa, ukuthi kuzokwenza ukubhujiswa kwaso sonke isimiso sezinto. Uma isitofu nge wesifunda amanzi, okuyinto libuyekeza ungafunda ngezansi, kusho ukuba khona kwe-futha kwegazi, ibanga okukhulunywe ngawo ngaphambili kufanele ibe ngu- 30 kwangu. I ukushuba ezindongeni umzimba ukushisa zingahluka kusuka amasentimitha 0.3 kuya 0.5. Uma izindonga kuyoba aphansi, kungenzeka kakhulu impahla ezishile-out, uma ngaphezulu - ukusetshenziswa kukawoyela kuyokhula. Ukuze uqinisekise Ukushisa ngempumelelo umzimba nokushisa iwukudambisa ukunwetshwa ezishisayo kwensimbi, kufanele kuqashelwe igebe whose banzi 1 isentimitha. It eyokwenza lesi sandiso. Uma umzimba ukushisa Yenziwe ipayipi, igebe Kufanele ube ngaphezulu wathi value. Lokhu kuzokwenza shisisa ukushisa-sensitive kahle kakhulu. Phakathi kwezinye izinto, uyokwenza kube lula ukuhlanza futhi anakekele design. Uma unquma ukwenza isitofu nge wesifunda amanzi ngezandla kokwakhe, imidwebo, ongazilungiselela. Lapho ngokwakha amapuleti ezithinta Ukushisa ukupheka umsebenzi, kufanele kube ukuthi kungenzeka ukhipha somlilo ukuhlanza umzimba ukushisa. Esikhaleni phakathi kwaso ipuleti bayozibuthela umlotha, kubathinta kabi ukusebenza kohlelo.
Umsebenzi Wamatshe kumele kwenziwe ongoti abanesipiliyoni kulo mkhakha. Uma ufika inqubo engalungile, ukusebenza uhlelo uyoba sezingeni eliphansi.
Ukuze ilungiselelo esachazwa uhlelo Ukushisa, ungakwazi ukuthenga isitofu "Bavaria" ngamanzi Ukushisa wesifunda, kodwa abanye abantu bakhetha ukwakha isakhiwo zabo. Brick ixhunywe necebo esekelwe isihlabathi nobumba. Uma kukhona namabhampa ukuhwebelana, abese esebenzisa leyo grinder uzodinga usike izintwana ezincane ipuleti, bese efakwe endaweni lapho kukhona inguquko. Musa ukufihla ingxenye ubumba, kusukela ngesikhathi ukuhlinzwa, ke uzolahlekelwa amandla futhi osypletsya. Ngemva kuhhavini omisiwe, okuyinto ingafakwa a umzimba ukushisa, lapho ezimbili ongakhetha idatha ukuxhaphaza ukuphi. Eyokuqala ihilela ukufakwa CIP. Lapho lokhu kuvunyelwe ukusebenzisa endzaweni lephephile, Ukushisa ukupheka imiklamo, ezithinta indawo tiled. Ngesikhathi esifanayo udinga ukususa ikhava phezulu futhi ifake umzimba ukushisa. Ngo odongeni firebox kufanele wenze imbobo lapho ipayipi uzobe eza irejista. Inketho sesibili kuhilela kwazo engxenyeni engenhla kudivayisi. Le ndlela kwaba bebaningi ngaphezulu. Emva kokuhlela ukubukeka kwesithando ngeke zishintshwe.
Izibuyekezo kuhhavini "Bavaria"
Sezitofu nge wesifunda amanzi "Bavaria" umise ngokwaso phakathi abathengi. It has a high futhi zenziwa kwi imishini German. Ngokusho abasebenzisi, njengoba timphawu letehlukene kukhona kalula ukufakwa, izindleko ezincane nokusebenza. Stoves abekwa fireclay isitini , futhi uhlelo esivuthayo ahlanzekile, bese kukhula Uhlolojikelele elangabi. Isithando somlilo imiklamo zenziwa 6 mm steel, futhi is kwahambisana by grate cast iron. Abathengi njengalelo elisensimini umnyombo idivayisi kuyinto insimbi engagqwali, okuyinto ekhiqizwa kusuka circuit esithandweni. Lokhu imishini libhekene okusezingeni eliphezulu Ukushisa amandla, ongafinyelela 9 kilowatts. Njengoba kuveziwe abasebenzisi, ikuvumela ukufudumeza igumbi, futhi leyo mali kuhluka 80 kuya kwezingu-150 cubic metres.
Zokupheka amalungiselelo Original ebusika